Pịa: Analytics Omume Ndepụta na Usoro-Free Environment | Martech Zone
Pịa: Analytics Omume Ndepụta na Usoro-Free Environment
Pịa abụrụla onye ọsụ ụzọ na ụlọ ọrụ nyocha, na-enye data omume na ngosipụta doro anya nke na-enyere ecommerce na ndị ọrụ nyocha aka ịkọwapụta ma melite nsogbu na saịtị ha. ClickTale ọhụrụ Onye Nduzi Anya na-enye evolushọn ọzọ, yana usoro enweghị koodu iji jikọta ihe na saịtị gị niile. Dị nnọọ na-arụtụ aka gị ihe omume mmewere na kọwaa ihe omume… ClickTale ka ndị ọzọ.
na Onye Nduzi Anya, Clicktale bụ otu n'ime ụlọ ọrụ izizi inye ihe ngwọta n'ime ntọhapụ nke Adobe Launch, ọgbọ na-abịa abịa nke njikwa ihe mkpado Adobe na ikpo okwu Adobe Cloud. Mwepụta site na Adobe ga-eme ka azụmaahịa ndị dị n'ịntanetị kwadoo ma jikwaa mkpado iji mee ka ahịa na-eme nke ọma, belata ọnụahịa ma melite arụmọrụ weebụsaịtị.
Site na itinye Onye Nduzi Anya n'ime Mwepụta nke Adobe, ndị na-ere ahịa dijitalụ nwere ike nweta nkewa dị elu site na interface maara nke ọma na nke kensinammuo. Ndị ahịa Clicktale agaghị enwe naanị mgbanwe dị mfe ka ha na-ebuputa Launch site na Adobe iji setịpụ ihe omume Clicktale, kamakwa na-erite uru site na ụzọ ọzọ na ahụmịhe dijitalụ na nghọta nke data Clicktale ha.
Teknụzụ pụrụ iche nke Clicktale na-ese onyinyo njem ndị ahịa, na-enyere ndị ahịa aka imeziwanye ahụmịhe dijitalụ maka ndị ahịa ha. Site na isoro ndị ọrụ teknụzụ dị mkpa dị ka Clicktale rụkọọ ọrụ, anyị nwere ike ị hụ na ndị ahịa anyị ritere uru site na ngwa ọrụ kachasị ike ruo taa. Jon Viray, Onye na-ere ahịa ngwaahịa, Adobe
Dịka akụkụ nke Clicktale na Adobe na-aga n'ihu mmekorita, Mbido nke Adobe tinyekwara atụmatụ ga-eme ka ndị ahịa na ndị mmekọ nwee ike ịnweta nghọta pụrụ iche nke Clicktale site n'ime nchekwa data n'ime Launch site Adobe. Nke a na-enye usoro dị mma ma dị ike iji gbakwunye ngwa mgbakwunye, dị ka akpaaka ahịa, olu nke ndị ahịa ma ọ bụ sistemụ ọ bụla ọzọ na-erite uru na nchịkọta data ihe nchọgharị, yana data Clicktale na nghọta.
PịaTale si Ngwọta Gụnye:
Nchọpụta Pzọ - uzo di n’ime peeji, akparamagwa n’ime akparamagwa na nketa dị egwu nke na-eme mgbanwe.
Heatmaps - ké ije, òké click, pịgharịa-apụghị iru, ntị na njikọ heatmaps.
Nzaghachi Oge - Lelee replays nke ndị ọrụ gị 'nchọgharị sessions iji jiri anya nke uche hụ ihe ha na-ahụ ma na-eme na saịtị gị site na desktọọpụ ma ọ bụ mobile.
Nchịkọta ntụgharị - chọpụta ihe na - arụ ọrụ na ihe anaghị adị maịlị ma ụdị gị.
Nchịkọta Ngwa - nghọta banyere onye ọrụ mkpa na akụrụngwa na ngwa ọdịnala na ngwakọ.
Ngwakọta nchịkọta - jiri Adobe, Webtrends, na Google Analytics.
Ngwakọta Ule - ya na Adobe Target, Qubit, Optimizely, Kaizen, Monetate, Oracle Maxymiser, Optimost, SiteSpect na Google Optimize.
Njikọ Ọdịnaya Ọdịnaya - ya na Adobe Experience Manager na Sitecore.
Njikọ nzaghachi - ya na OpinionLab, Medallia Digital, iPercepts, Qaultrics, Usabilla, na Liveperson.
Njikọ Njikwa Tag - ya na Adobe Markeitng Cloud, Ensighten, IBM, Tealium, Signal, na Google Tag Manager.
Njikọ E-commerce - na Magento, XCart, Zencart, na Yahoo! Obere Ahia.
Tags: adobeAdobe nchịkọtaNjikwa Ahụmahụ AdobeAdobe Markeitng Igwe ojiinwa adobenchịkọta ihe omume nchịkọtammemme nchịkọtanlebara anyaileba anyaihe omumeGoogle AnalyticsGoogle na-ebulinjikwa faili googleokpomokuIBMihe omimiKaizennjikọ okpomọkụLivePersonmagentoMedallia Dijitalụmonetateòké ije heatmapechichekachasị mmaIhe kacha mmaOracle MaxymiserNdị isikwubitpịgharịa irumgbaàmàsaịtịSiteSpectTealọmUsabillawebụsaịtịXCartYahoo! Obere AhiaZencart
Kaleidoscope: A Diff App maka Apple maka nchekwa, Koodu, na Foto